နင်ဂျာ (ninja) သို့မဟုတ် ရှီနိုဘီ (Shinobi) သည် ဂျပန်ပဒေသရာဇ်ခေတ် မှ လျှို့ဝှက်အမှုဆောင် သို့မဟုတ် ကြေးစား တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ နင်ဂျာ၏ လုပ်ဆောင်မှုများတွင် သူလျှိုလုပ်ခြင်း ၊ လှည့်စားခြင်းနှင့် အံ့အားသင့်စရာ တိုက်ခိုက်မှုများပါဝင်သည်။  သူတို့၏ ပုံမှန်မဟုတ်သော စစ်ဆင်ရေးများကို လျှို့ဝှက်နည်းလမ်းများသုံး၍ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းသည် ဆာမူရိုင်း များ၏ ဂုဏ်သိက္ခာအောက်နိမ့်ကျပြီး ဂုဏ်သရေမဲ့သောလုပ်ရပ်ဟု မှတ်ယူခဲ့ကြသည်။  အထူး လေ့ကျင့်သင်ကြားထားသော သူလျှိုနှင့်ကြေးစားများ ဖြစ်သော ရှိနော့ဘိ အစစ်များသည် ၁၅ ရာစု ဆန်ဂိုးကု ခေတ်အတွင်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော်လည်း ယခင် အစောပိုင်း ၁၂ ရာစုကတည်းက အလားတူ နင်ဂျာများ ရှိခဲ့ကြသည်။  
ဆန်းဂိုးကုခေတ် မငြိမ်မသက် ဖြစ်နေစဉ်တွင် အိဂါပြည်နယ် နှင့် ကိုးဂါ ကျေးရွာ ပတ်ဝန်းကျင်တို့တွင် ကြေးစားများနှင့် စပိုင်များ ခြေချင်းလိမ်နေခဲ့ကြပြီး ထိုဒေသများမှ နင်ဂျာနှင့် ပက်သတ်သော သိကောင်းစရာ များစွာရရှိခဲ့သည်။ ၁၇ ရာစုတွင် တိုကူဂါဝါရှိုးဂန်းနိတ် လက်အောက်တွင် ဂျပန်ကိုပေါင်းစည်းလိုက်သောအခါ နင်ဂျာတို့သည် မှေးမှိန် ပျောက်ကွယ် သွားခဲ့သည်။  ၁၇ ရာစုနှင့် ၁၈ ရာစုနှစ်များတွင် တရုတ် စစ်ရေး အတွေးအခေါ် အပေါ် မကြာခဏ အခြေခံ၍ ရေးသားလေ့ရှိသော ရှီနိုဘီ လက်စွဲစာအုပ်အများစုရှိပြီး နာမည်ကျော်သော စာအုပ်မှာ ဘန်ဆန်ရှူကိုင်း (၁၆၇၆) ဖြစ်သည်။ 
မေဂျီ ပြန်လည် ထူထောင်ခြင်း ခေတ် (၁၈၆၈) အချိန် တွင် ရှီနိုဘီ တို့သည် ဂျပန်တွင်လူကြိုက်များသော စိတ်ကူးယဉ် နှင့် လျှို့ဝှက်သည်းဖို ဇာတ်လမ်းများ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ နင်ဂျာ များအား ဒဏ္ဍာရီများ နှင့် ရိုးရာပုံပြင်များတွင် ထင်ရှားစွာထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ကိုယ်ဖျောက်နိုင်ခြင်း ၊ ရေပေါ် လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့် သဘာဝဒြပ်စင်များကို ထိန်းချုပ်ခြင်း စသည့် ဒဏ္ဍာရီဆန်သော စွမ်းအင်များ နှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့် ရေပန်းစားလူကြိုက်များသော ယဉ်ကျေးမှုများတွင် သူတို့အားမြင်သောအမြင်မှာ ဆန်ဂေါ့ကုခေတ်က လျှို့ဝှက်လူသားများထက် ထိုသို့သော ဒဏ္ဍာရီ နှင့် ရိုးရာပုံပြင်များ အပေါ်တွင် အခြေခံသည်။
နင်ဂျာအား ဂျပန် ကန်ဂျိ အက္ခရာဖြင့် ရေးသားထားပုံ
နင်ဂျာသည် "忍者" ဆိုသော ဂျပန် ကန်ဂျိ အက္ခရာ နှစ်လုံးကို အွန်ယောမိ ( အစောပိုင်းတရုတ်အလယ်အလတ်လွှမ်းမိုးမှု ) အဖြစ် ဖတ်ရှုခြင်းဖြစ်သည်။ ဒေသခံ ကွန်ရောမိ ဖတ်ကြားမှုတွင် ၎င်းအား ရှိနော့ဘိ ဟု အသံထွက်ပြီး ရှိနော့ဘိ နော့ မိုနော့၏ အတိုကောက် ဖြစ်သည်။
ရှိနော့ဘိ ဟူသောဝေါဟာရကို ၈ ရာစုနှောင်းပိုင်းမှ မန် မန်ယောရှူး ကဗျာများတွင် စတင်‌ေတွ့ရှိရသည်။  ရှိနော့ဘိ ( 忍 ) ၏ နောက်ခံအဓိပ္ပာယ်မှာ "ခိုးယူရန်၊ ဖုံးကွယ်ရန်" နှင့်ထပ်မံ၍ " သည်းခံရန်" ကိုဆိုလိုသည်။ မိုနော့ ( 者 ) ဆိုသည်မှာ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦးကို ဆိုလိုသည်။
လူကြိုက်များသောရိုးရာပုံပြင်များစွာရှိသော်လည်း နင်ဂျာ ၏ သမိုင်းဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများမှာရှားပါးလှသည်။ သမိုင်းပညာရှင် စတီဗင်တန်းဘူး က အဆိုပါ နင်ဂျာများကို နိမ့်ပါးသောလူတန်းစားများမှ အများဆုံးစုဆောင်းခဲ့ခြင်းကြောင့် စာပေဘက်မှ သူတို့အပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါးသည်ဟုဆိုခဲ့သည်။  လျှို့ဝှက်စွာ အလုပ်လုပ်ရန် သဘောတူခြင်း နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ဂုဏ်ကျက်သရေမပါဝင်ဘဲ သူတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကိုငွေကြေးဖြင့် ရောင်းဝယ်ရန် သဘောတူခြင်းတို့သည် နင်ဂျာတို့၏ နဂိုမူလလူမှုရေးအခြေအနေကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ရှုမြင်ကြသည်။ သမိုင်းမှတ်တမ်းများရှားပါးမှု ဥပမာအနေနှင့် ဟိုးဂျန်ပုံပြင် နှင့် ဟေးကဲပုံပြင် စသည့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ဂန္ထဝင်စာပေများတွင် အထက်တန်းလွှာ ဆာမူရိုင်းများကိုသာ အဓိက အသားပေးထားပြီး သူတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ပရိသတ်များကို ပို၍ ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ 
နင်ဂျာ ဆိုသော အမည်နာမကို တစ်ခါတစ်ရံတွင် ၄ ရာစုမှ ဒဏ္ဍာရီ ဆန်ဆန် မင်းသား ယာမာတို တာကဲရု နှင့်နောက်ကြောင်းပြန် ဖော်ပြလေ့ ရှိသည်။  ကိုဂျီကီ ဟုခေါ်သော ဂျပန် ဒဏ္ဍာရီမှတ်တမ်းတွင် ယာမာတို တာကဲရုသည် ငယ်ရွယ်သောမိန်းကလေး တစ်ဦး အဖြစ် ရုပ်ဖျက်ကာ ကူမာဆိုလူမျိုး ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကို လုပ်ကြံခဲ့သည်။  သို့သော် ဤမှတ်တမ်းများ ဂျပန်သမိုင်း၏ အလွန်စောသော အချိန်က ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောကြောင့် နောက်ပိုင်းမှတ်တမ်းများ ဖြစ်သော ရှိနော့ဘုများနှင့် ဆက်စပ်မှု မရှိနိုင်ပေ။ ပထမဆုံး မှတ်တမ်းတင်ထားသောသူလျှိုလုပ်ခြင်းမှာ ၆ ရာစု မင်းသား ရှိုးတိုးကု ၏ စေခိုင်းမှု ဖြစ်သည်။  ထိုသို့သော နည်းဗျူဟာများကို အစောပိုင်းကာလကပင် မနှစ်မျို့စရာဟု ယူဆကြပြီး ၁၀ ရာစု ရှိုမွန်ကီ မှတ်တမ်းအရ သူလျှိုကောင်လေး ကိုဟာရု မာရုသည် သည် သူပုန် တိုင်ရာနော့ မာဆာကာဒို ကို သူလျှိုလုပ်ခြင်းကြောင့် အသတ်ခံခဲ့ရသည့် ဟု ဆိုသည်။  နောက်ပိုင်း ၁၄ ရာစု စစ်ပွဲဆိုင်ရာ မှတ်တမ်း တိုင်ဟေးကီ တွင် ရှိနော့ဘိအား ရည်ညွှန်းမှုအများအပြားပါဝင်ပြီး ရဲတိုက်အား မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းကို အလွန်ကျွမ်းကျင်သော အမည်မဖော်ပြ ထားသော ရှိနော့ဘိတစ်ဦးမှ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု အသိအမှတ်ပြုထားသည်။။ 
၁၅ ရာစုအထိ သူလျှိုများကို သူလျှိုလုပ်ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်၍ အထူးလေ့ကျင့် သင်ကြားခြင်းမျိုး မရှိခဲ့ပေ။  ဤအချိန်လောက်တွင် ရှိနော့ဘိ ဟူသောစကားလုံးသည် နင်ဂျာ ကို လျှို့ဝှက်အေးဂျင့်အဖွဲ့များ အဖြစ် ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြသတ်မှတ်ထားသည်။ သမိုင်းမှတ်တမ်းများတွင် အထောက်အထားများကို တွေ့ရပြီး ထိုမှတ်တမ်းများအရ ဆန်ဂေါ့ကုခေတ်အတွင်း လျှို့ဝှက်စစ်သားများကို ရှိနော့ဘိများဟု ရည်ညွှန်းခဲ့ကြသည်။  နောက်ပိုင်းတွင်သူလျှိုလုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ လက်စွဲစာအုပ်ကိုတရုတ် စစ်မဟာဗျူဟာ ကျမ်းများတွင် အခြေခံပြီး ဆွန်ဇူး၏ စစ်သေနင်္ဂဗျူဟာ အနုပညာ ကဲ့သို့သော စာပေများကို ကိုးကားထားသည်။
အိဂါ နှင့် ကိုးဂါမျိုးနွယ်စုတို့သည် အိဂါပြည်နယ် ( ယနေ့ခေတ် မီအဲစီရင်စု) နှင့် ကပ်လျက် ရှိသည့် ကိုးဂါဒေသ (ယခုအခါ ရှိဂါ့ စီရင်စု) တို့တွင် နေထိုင်သော မိသားစုများ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုဒေသများမှ ကျေးရွာများသည် နင်ဂျာတို့အား လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းကို အားစိုက်လုပ်ကိုင်ကြသော ကျေးရွာများ ဖြစ်သည်။ ဝေးလံခေါင်းပါးခြင်း နှင့် အနီးအနားရှိ တောင်ကုန်းများကြောင့် သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်းတို့သည် နင်ဂျာတို့၏ လျှို့ဝှက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် အခန်းကဏ္ဍတစ်ခု အဖြစ် ပါ ဝင်သည်။  ဤတောင်တန်းဒေသများရှိ နင်ဂျာတို့၏ မူလအစနှင့် ပတ်သက်သော သမိုင်းဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများကို ယေဘုယျအားဖြင့် မှန်ကန်သည်ဟု မှတ်ယူကြသည်။  ဂေါ့ကာဂါ့မိ ဖူရောကု မှတ်တမ်းစဉ်က မျိုးနွယ်စု နှစ်ခု၏ ရင်းမြစ်အကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည်။
၁၅၅၈ ခုနှစ်တွင် ရောကာကု ယောရှိကာတာသည် ဆာဝါယာမာရဲတိုက်ကို မီးရှို့ရန်အတွက် နင်ဂျာအဖွဲ့တစ်ခုကို စေခိုင်းခဲ့သည်။ နင်ဂျာခေါင်းဆောင်သည် အင်အား ၄၈ ဦး ရှိသော နင်ဂျာများကို ရဲတိုက်သို့ လှည့်စားခြင်း နည်းလမ်းသုံး၍ ဦးဆောင်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ဘာကဲမိုနို-ဂျုဆု ( "တစ္ဆေ နည်းလမ်း") ဟု အမည်ပေးထားသည့် နည်းလမ်းဖြင့် သူ၏ လူတစ်ဦးသည် ရန်သူမိသားစု၏ စည်းတံဆိပ်ပါသော မီးအိမ်ကို ခိုးယူ၍ ထိုသို့ စည်းတံဆိပ်ပါသော မီးအိမ်အတုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုမီးအိမ်များကို ကိုင်တွယ်ပြသခြင်းအားဖြင့် သူတို့သည် ရဲတိုက်အတွင်းသို့ တိုက်ခိုက်စရာ မလိုဘဲ ဝင်ရောက် ခွင့်ရခဲ့သည်။ အတွင်းသို့ ရောက်သောအခါ နင်ဂျာများသည် ရဲတိုက်အား မီးရှို့လိုက်ပြီး ယောရှိကာတာ၏ စစ်တပ်မှ နောက်ပိုင်း ဆက်လက်၍ အောင်ပွဲရယူနိုင်ခဲ့သည်။  ရှိနော့ဘိ တို့၏ ကြေးစား သဘောသဘာဝကို ဆာဝါယာမ ရဲတိုက်အား မီးရှို့ပြီး မကြာမီ နောက်မီးလောင်မှုတစ်ခုတွင် တွေ့မြင်နိုင် ခဲ့သည်။ ၁၅၆၁ ခုနှစ်တွင် ကိဇာဝါ နာဂါမာဆာ ၏ လက်အောက်မှ တပ်မှူးများသည် မာအိဘာရာရှိ ခံတပ်ကို သိမ်းပိုက်နိုင်ရန် ဂျီနင်း အဆင့်ရှိ အိဂါနင်ဂျာ သုံးဦးကို ငှားရမ်းခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က အိဂါနင်ဂျာများ ကို ငှားရမ်းခဲ့သည့် ရော့ကာကု ယော့ရှိတာကာ သည် ခံတပ်ကို အုပ်စိုးသူဖြစ်ပြီး တိုက်ခိုက်မှု၏ ပစ်မှတ်လည်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကြေးစား ရှိနော့ဘိများသည် အမိန့်နာခံရန် စိတ်မပါခဲ့ကြပေ။ စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း မီးရှို့ တိုက်ခိုက်မှု မစတင်သော အခါတွင် အိဂါလူများက ဒေသတွင်းမှမဟုတ်သော တပ်မှူးများအား သူတို့ ရှိနော့ဘိ တို့၏ နည်းဗျူဟာများကို နားမလည်နိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ အကယ်၍ သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင် မဟာဗျူဟာအပေါ် မူတည်၍ လှုပ်ရှားခွင့် မပြုခဲ့လျှင် စစ်ဆင်ရေးမှ စွန့်ခွာမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် မီးလောင်သွားပြီး နာဂါမာဆာ၏ စစ်တပ်သည် ဝရုန်းသုန်းကား အနေအထားဖြင့် ရဲတိုက်အား သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်။
ပထမဆုံးသော အထူးသင်တန်းကို ၁၅ ရာစု အလယ်ပိုင်းတွင် စတင်ခဲ့ပြီး ဆာမူရိုင်းမိသားစုများက သူလျှိုလုပ်ခြင်းနှင့် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်းအပါအဝင် လျှို့ဝှက်စစ်ဆင်ရေးကို အာရုံစိုက် လာကြသည်။  ဆာမူရိုင်းကဲ့သို့ပင် နင်ဂျာသည် ရိုးရာ ဓလေ့ထုံးတမ်းများကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး ထိုမိသားစုအတွင်း လက်ဆင့်ကမ်းပေးသော အလုပ်အကိုင်တစ်ခု အဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာသည်။  နင်ဂျာအကြောင်း ရေးသားသူ တန်းဘူး ၏အဆိုအရ နင်ဂျာများကို ကလေးဘဝကတည်းက လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ပြီး ဆာမူရိုင်း မိသားစုများတွင်လည်း အလားတူပင် ဖြစ်သည်။
မိဇုဂုမိုသည် နင်ဂျာတို့ ရေပေါ်တွင် လမ်းလျှောက်ရန် သုံးသော ဖိနပ်များဟု ယူဆကြသည်။. ထိုဖိနပ်များတွင် စီးနင်းသူ၏ အလေးချိန်ကို ဖိနပ်၏ ကျယ်ပြန့်သော အောက်ခြေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဖြန့်ကျက်ခြင်းဖြင့် ရေပေါ်တွင် လမ်းလျှောက်နိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားသည်။ မိဇုဂုမိုသည် ဂျပန်ရေပင့်ကူအား ဒေသခံတို့ ခေါ်ဝေါ်သော အမည် ဖြစ်သည်။ မိဇုဂုမိုကို "မစ်ဘတ်စတာ" ဟု ခေါ်သည် "ဒဏ္ဍာရီများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း"​တီဗွီ အစီအစဉ်တွင် ပြသ၍ ရေပေါ်တွင် လျှောက်၍ မရနိုင်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။ အုကိဒါရိ ဟု ခေါ်သော အလားတူ ဖိနပ်များကိုလည်း ရေပေါ်တွင် လမ်းလျှောက်ရန် အသုံးပြုကြပြီး အောက်ခြေတွင် ပြား၍ ဝိုင်းသော ရေပုံး ပါဝင်သည်။ သို့သော်လည်း တည်ငြိမ်မှု မရှိပေ။ ကျုံ့နိုင်ချဲ့နိုင်သော အကာနှင့် အသက်ရှူပိုက်များက နင်ဂျာများကို ရေအောက်တွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ နေထိုင်နိုင်ရန် ကူညီပေးသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ နှင့် နင်ဂျာများ[ပြင်ဆင်ရန်]
၁၉၄၁ ခုနှစ်တွင် ရဲဘော်သုံးကျိပ်တို့ သည် ဂျပန်အင်ပိုင်ယာမှ အထူးထောက်လှမ်းရေးယူနစ်ဖြစ်သော မိနာမိ ကီကန် မှ စစ်ပညာသင်ကြားပေးခြင်း ခံသည်။ မိနာမိကိကန်းသည် နာကာနိုကျောင်းမှ ထွက်သူများဖြင့် အဓိက ဖွဲ့စည်းထားပြီး နာကာနိုကျောင်းမှာ နောက်ဆုံး နင်ဂျာဖြစ်သော ဖူဂျီတာ ဆီကိုက ကျောင်း၏ အစောပိုင်းနှစ်များတွင် ကိုဂါးမှ နင်ဂျုဆု အတတ်ပညာကို သင်ကြားပေးခဲ့ဖူးသည်။ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ထဲမှ ဗိုလ်နေဝင်း၊ ဗိုလ်ရန်နိုင်၊ ဗိုလ်ဇေယျ နှင့် ဗိုလ်ကျော်ဇောတို့သည် တိုက်ပွဲတွင်း ကွပ်ကဲမှု၊ အဖျက်အမှောင့်လုပ်ငန်း၊ ပြောက်ကျားစစ် အပါအဝင် နင်ဂျာနည်းစနစ်များကို သင်ကြားခဲ့သည်ဟု ယူဆရသည်။ ထိုသို့ နိုင်ငံခြားသား စစ်သားများကို နာကာနိုကျောင်းထွက်များမှ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းသည် ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲကိစ္စဖြစ်ပြီး ဤသင်ကြားမှု အပြင် အခြားမှာ ဂျပန်လျှို့ဝှက်စစ်တပ်အေဂျင်စီ မှ ဟာဘင်တွင် ရုရှားတို့အား သင်ကြားပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။.
ယာဂျူး မုနဲတိုရှိ (၁၅၂၉-၁၆၀၆) : ရှင်းကဂဲ-ရူး ကျောင်းမှ ထင်ရှားသော ဓားသမား။​မုနဲယောရှိ၏ မြေးဖြစ်ပြီး သူ၏ အဖိုးမှာ နင်ဂျာတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ပြောပြခဲ့သည်။
အိရှိကာဝါ ဂိုအဲမွန် (၁၅၅၈-၁၅၉၄) : ဂိုအဲမွန်သည် မျက်နှာကြက်အတွင်း ပုန်းခိုရာ နေရာမှ အိုဒါ နိုဘုနာဂါ၏ ပါးစပ်အတွင်းသို့ ပြွန်ချောင်းသုံး၍ အဆိပ်များကို လောင်းထည့်ခဲ့သည်။, ဂိုအဲမွန်နှင့် ပတ်သက်သော လျှို့ဝှက်သည်းဖို ဇာတ်လမ်းများစွာရှိပြီး ဤဇာတ်လမ်းမှာ အတည်မပြုနိုင်ပေ။
နင်ဂျာတို့သည် ဂျပန်နှင့် အနောက်တိုင်းတို့၏ လူကြိုက်များသော မီဒီယာများဖြစ်သော စာအုပ်များ၊ တီဗွီများ၊ ကာတွန်းများ၊​ရုပ်ရှင်များ၊ ဗွီဒီယိုဂိမ်းများ၊ နာရုတိုကဲ့သို့သော အာ့နီမဲ ရုပ်ပြများ အမေရိကန် ရုပ်ပြများ တွင် ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ ရှေးခေတ် ဂျပန်မှ ယနေ့ခေတ် ကမ္ဘာ့မီဒီယာ အထိ နင်ဂျာတို့အကြောင်းကို အစစ်အမှန်မှ အခြေခံအားဖြင့် လည်းကောင်း ကြည့်ကောင်းစေရန်လည်းကောင်း လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် ချဲ့ကားထားသည် အထိ လူကြိုက်များသော ချယ်မှုန်းပြသမှုတွင် အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံ ရှိကြသည်။
↑ 熊若 Archived 28 July 2020 at the Wayback Machine. 忍者名鑑
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နင်ဂျာ&oldid=731552" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၂၂:၃၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။